Warar - 2018 Sichuan Ju Neng Dayrta Canton Carwo ayaa si guul ah ku dhammaatay
6dii fiidnimo ee Noofambar 4, 2018, Bandhiggii Dayrta ee Dayrta, oo ay ka soo qayb galeen Sichuan Ju Neng, ayaa si guul leh loogu soo gabagabeeyey!
Bandhigu wuxuu qaatay 5 maalmood wuxuuna helay wadar dhan 127 macaamiil dibedda ah oo ka kala yimid adduunka oo idil. Macaamiisha ayaa muujiyey xiisaha weyn ee ay u qabaan badeecadaha aan dunta lahayn ee dhalaalaya waxayna muujiyeen baahidooda wax iibsi Waabkani wuxuu ku yaal hoolka qalabka caafimaadka. Macaamiisha badankood waa caafimaad. Xirfadleyda goobta waxay awood weyn ku leeyihiin suuqa nonwovens-ka caafimaadka.
Marka hore, qaybinta macaamiisha
Macaamiisha timid aqalkan ayaa badiyaa ku yaalay Bariga Dhexe, Koonfur Bari Aasiya, Koonfurta Ameerika iyo Ustaraaliya. Kuwaas waxaa ka mid ah, Indooniisiya, Singapore, Hindiya iyo macaamiil kale ayaa ka mid ahaa inta badan, macaamiisha adduunka oo dhan waxay ahaayeen kuwo aad saaxiibtinimo u leh, 80% macaamiisha ah waxay adeegsiga Shiinaha WeChat u adeegsadeen isgaarsiinta maalinlaha ah. Lasoco si aad uhesho sahlanaato.
Ta labaad, baahida loo qabo alaabooyinka aan tolmo wanaagsan lahayn
Maaskaro-dhalaalaya maaskaro, suufka dareeraha nuugaya ee caafimaadka, maaskaro, suuf saliid-nuugaya, maro tirtiraya iyo alaabooyin aan tolmo lahayn, maaskaro, gaar ahaan maaskaro caado-daabacan, ayaa leh macaamiisha ugu badan, oo ay ku xigto dhiig-nuugid caafimaad suufka Nadiifinta nadiifinta, macaamiisha badankood waxay heleen shaybaarro si ay u muujiyaan ujeedooyinka wada shaqeynta muddada-dheer.
Saddexaad, dacaayaddu waxay ka faa'iideysataa dacaayad
Iyada oo faa'iidooyinka Sichuan Ju Neng ay tahay soo saare, qalabka dibedda laga keeno ee aasaaska u ah tayada xasilloon, dharka dhalaalaya ayaa qaata kalluunka California ee korantada, kaas oo ilaaliya waxqabadka maaddada illaa 3-5 sano, oo aad uga wanaagsan inta badan soo saarayaasha guryaha ayaa kaliya badbaadin kara . Muddo gaaban oo 5 bilood ah, tikniyoolajiyadda daabacaadda ee gaarka ah ayaa sidoo kale si wanaagsan loo soo dhoweeyey. Faa'iidooyinkaas, waxaan kordhin doonnaa kalsoonida macaamiisheenna iyo iskaashigeenna.
Sichuan Jueneng Qalabka Filter Co., Ltd. waxay ku heshay dhowr macaamiil duug ah bandhigga. Macaamiisha ayaa muujiyay qanacsanaanta wada shaqeyntii hore waxayna soo bandhigeen fikrado xirfadeed si wadashaqeyntu u noqoto mid siman. Bandhigu waa mid aad loo jecel yahay waana matxafka kaliya ee qalabka caafimaadka. Soo saaraha dharka aan tolnayn ee meltblown, carwadan ayaa gaadhay natiijooyin wanaagsan, ku arag mar dambe Carwada Canton!
Macluumaadka ku saabsan badeecadaha meltblown, la xiriir Ms. Li: +86 18116628077
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile Heerka 3 Maaskarada Qalliinka, 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, Maaskaro Ffp3, 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka, 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda,